Deadly Alliances Against Muslims မြန်မာသမ္မတ၊ သီရိလင်္ကာသမ္မတ၊ အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်တို့နှင့် သူတုို့ရဲ့ မဟာမိတ်တွေက အကြမ်းဖက်မှုတွေ ကျူးလွန်နေတဲ့ မွတ်စလင်မုန်းတီးရေး ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးအစွန်းရောက် အုပ်စုတွေကုို သည်းခံနေ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« အပြင်သကာလိုချို အတွင်းတမာလိုခါးသောမြေခွေးလူသားများထံပေးစာ Rakhine Vs Bama FIGHT
လူရိုင်းစိတ်တွေ ဝင်အောင်၊ နိုင်ငံတော် သီချင်း ဆိုပြီး သူများ အသက်၊ အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ် ဖျက်စီတတ်အောင် စနစ်တကျ မြေတောင်မြှောက် နှစ်ငါးဆယ်ကျော် လေ့ကျင့်သင်ကြား ဦးဆောင် လမ်းပြပေးခဲ့ကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ »
Deadly Alliances Against Muslims မြန်မာသမ္မတ၊ သီရိလင်္ကာသမ္မတ၊ အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်တို့နှင့် သူတုို့ရဲ့ မဟာမိတ်တွေက အကြမ်းဖက်မှုတွေ ကျူးလွန်နေတဲ့ မွတ်စလင်မုန်းတီးရေး ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးအစွန်းရောက် အုပ်စုတွေကုို သည်းခံနေ
My Friend translated >>>
မြန်မာသမ္မတ၊ သီရိလင်္ကာသမ္မတ၊ အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်တို့နှင့် သူတုို့ရဲ့ မဟာမိတ်တွေက အကြမ်းဖက်မှုတွေ ကျူးလွန်နေတဲ့ မွတ်စလင်မုန်းတီးရေး ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးအစွန်းရောက် အုပ်စုတွေကုို သည်းခံနေသလုို လုပ်ပြနေခြင်းက တစ်ကယ်တော့ ရူးသွပ်မှုသာဖြစ်တယ်။
ဒေသတစ်ခုလုံး ထိမ်းမနုိုင် သိမ်းမရဖြစ်အောင် မပြန့်နှံ့ခင် ဒီလုပ်ရပ်မျိုးတွေကုို ပြစ်တင်တားဆီးသင့်ပါတယ်။
နယူးယော့တုိုင်းသတင်းစာ The New York Times
This entry was posted on October 18, 2014 at 4:00 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.